स्थानीय सरकार, मध्यवर्ती क्षेत्र र मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व | Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
स्थानीय सरकार, मध्यवर्ती क्षेत्र र मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व
२०७६ पुष २१, सोमबार १२:०९ गते
आजभोलि मानव–वन्यजन्तुका घटना बढ्दै गएका छन्, जसबाट मानवीय मृत्यु, घाइते र धन तथा बालीनालीको प्रशस्त क्षति भएको छ । मानव–वन्यजन्तु र मानव–संरक्षणकर्मीबीचको द्वन्द्व आज संरक्षणमा चुनौती बन्दै गएको छ । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जसँगमात्रै १७ वर्षको अन्तरालमा १५८ जनाको गैँडा, हात्ती, बाघबाट मृत्यु भएको तथ्याङ्क छ ।
वन्यजन्तु संरक्षणका लागि स्थानीय र वन्यजन्तु संरक्षणमा लागेका संरक्षणकर्मी मह¤वपूर्ण खम्बा हुन् । वन्यजन्तु, मानव र संरक्षणकर्मीको त्रिपक्षीय सम्बन्धलाई मजबुत र सामञ्जस्यपूर्ण बनाएमात्रै दिगो संरक्षण सम्भव छ । दिगो संरक्षण नै आर्थिक विकासको आधार हो । संरक्षण कार्यमा मानवलाई अलग राख्दा, मानवले वन्यजन्तुलाई आफ्ना शत्रु ठान्दा हाम्रै वातावरण, हाम्रै भविष्य र हाम्रै अस्तित्वमा सङ्कटमा पर्छ ।
वन्यजन्तुलाई उनीहरुकै प्राकृतिक वातावरणमा रमाउन दिनुपर्छ । संरक्षणको विकल्प संरक्षण नै हो । वन्यजन्तुलाई मित्रभावले हेरी उनीहरुप्रति माया र अपनत्वको भाव विकास गराउनुपर्छ । त्यसैले, मानवको मात्रै होइन सिङ्गो पृथ्वीकोका लागि वन्यजन्तुको अस्तित्व कायम राख्न आवश्यक छ ।
बढ्दो जनसङ्ख्या, सहरीकरण, वन फँडानी, अतिक्रमणले वन्यजन्तुका बासस्थान मासिँदै गएको छ । आहारामा कमी आएको छ । पानीका स्रोत सुक्दै गएका छन् । ठूला विकास निर्माण तथा पूर्वाधार निर्माणले वन्यजन्तु हिँड्ने बाटा जैविक मार्गको विनाश भएको छ ।
मानव आफ्नो आहाराका लागि वन्यजन्तुको आहारा खोस्छ, आफ्नो बासस्थानका लागि उसको बासस्थान खलबल्याउँछ । आफ्नो सडक निर्माणका लागि वन्यजन्तुको जैविकमार्ग हनन गर्छ । मानवले आफ्नो अधिकारका लागि वन्यजन्तुको अधिकार नै खोसिदिएपछि बिचरा निमुखा वन्यजन्तुले आफ्नो अधिकारका लागि के गर्ने ? अनि, अन्तिम विकल्पका रुपमा मानवबस्ती छिर्न बाध्य हुन्छ । जब ऊ मानवबाट असुरक्षित हुन्छ तबमात्रै उसले प्रतिरक्षाका लागि आक्रमण गर्छ । वन्यजन्तुलाई जिस्क्याउँदा पनि आक्रमण गर्छन् ।
वन्यजन्तुको बासस्थान विनाससँगै यिनको संख्या र अवस्था घटिरहेको बेलामा यिनको बाँच्न पाउने अधिकारको हक सुनिश्चित गरिएको छैन, जुन गरिनुपर्छ । वन्यजन्तु बाँच्न पाउने र मार्न पाउने अधिकार दुवै अधिकार हकका रुपमा राखिनुपर्छ । जब वन्यजन्तुको बासस्थानमा हामी पुग्छौँ वा यिनीहरु हाम्रो बासस्थानमा आइपुग्छन, अनि विवाद सुरू हुन्छ । वन्यजन्तुका यस्ता विवादहरुलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि नीति नियमको खाँचो पर्दछ ।
उहिले वन्यजन्तु र मानवबीच सांस्कृतिक र धार्मिक सम्बन्ध थियो । वन्यजन्तुलाई विभिन्न देवीदेवताका अवतार र शक्तिका रुपमा पूजा गरिन्थ्यो । यसले वन्यजन्तु संरक्षणमा विशेष मह¤व राख्दथ्यो, तर अहिले मानव र वन्यजन्तुको सम्बन्ध ठीक उल्टो भएको छ ।
जनसङ्ख्या बढ्दो क्रममा छ भने वन्यजन्तु घट्दो क्रममा छन् । पृथ्वीको सर्वश्रेष्ठ प्राणी मानव आज वातावरण र वन्यजन्तु विनाशको प्रमुख पात्र भएको छ । केही मानिसका लागि वन्यजन्तु बोझ भएका छन् । शत्रु भएका छन् । आखिरमा वन्यजन्तु हाम्रा शत्रु कहिल्यै थिएनन् र कदापि हुन सक्दैनन् । बरू, उनीहरु मानव अस्तित्वका प्रमुख हिस्सा हुन् ।
स्थानीय जनतामा वन्यजन्तुको मह¤व, आवश्यकता र यसबाट हुने अवसरसम्बन्धी जनचेतनाको विकास गर्न नितान्त आवश्यक छ ।
स्थानीयलाई संरक्षण कार्यमा प्रत्यक्ष सहभागी गराउनुपर्छ । आरक्ष निकुञ्जभित्रका रोजगारीका अवसरमा उनीहरुलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । जसबाट उनीहरुको आयआर्जन बढ्छ भने उनीहरुमा वन्यजन्तुप्रति मायाभाव र निकुञ्ज आरक्षप्रति अपनत्वको भाव बढाउँछ । वन्यजन्तुलाई जीवित राखे पो हाम्रो पनि संरक्षण हुन्छ ।
निमुखा वन्यजन्तुको हत्या गरी कसरी शोख पूरा हुन्छ र शान बढ्छ ? वन्यजन्तु चोरीसिकारीलाई स्थानीय तहबाटै नियन्त्रण र निरूत्साहित गर्ने अभियान चलाउनुपर्छ । वन्यजन्तु मारेर होइन देखाएरै मनग्य कमाइ हुन्छ र पर्यावरणलाई फाइदा पुग्छ भन्ने बोध भएपछिमात्रै वन्यजन्तु पर्यटन फस्टाउन थाल्छ । त्यसलाई गौरवको विषयमा सीमित नराखी स्थानीयलाई जीविकोपार्जन र राज्यलाई राजस्वको स्रोतका रुपमा विकसित गर्दा वन्यजन्तु संरक्षण प्रतिफलमूलक र दिगो हुन्छ । स्थानीयले वन्यजन्तु भगाएर होइन जोगाएर लाभ हुने बुझ्नुपर्छ ।
हामीसँग संसारलाई देखाएर तान्ने ल्याकत भएका अनेक वन्यजन्तु छन्, त्यसमा पनि बाघ, गैँडा, हात्ती र चराचुरूङ्गी अझ विशेष हुन् । मध्यवर्ती क्षेत्रका जनतामा संरक्षणसम्बन्धी ज्ञानको अझै अभाव रहेको छ । बाली विनास गरेपछि स्थानीयले वन्यजन्तुलाई घाइते बनाउने र हत्या गर्ने गरेका कुरा नौला होइनन् । पीडित जनतामा वन्यजन्तुप्रति बदला र प्रतिशोधको भावना बढ्दै गएको छ । तसर्थ, वन्यजन्तु–मानवबीचको द्वन्द्व संरक्षणको एक प्रमुख चुनौती भएको छ । वन्यजन्तुप्रति बदला र प्रतिशोधले वन्यजन्तु संरक्षण कदापि हुन सक्दैन ।
चोरीसिकार र अंगको अवैध व्यापारले तीव्रता पाएपछि सन् साठीको दशकमै विदेशी विज्ञ टोलीले नेपालमा वन्यजन्तु सखाप हुने चेतावनी दियो । त्यसकै सेरोफेरोमा आयो, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन–२०२९ । त्यसपछि बल्ल नेपालमा वन्यजन्तु संरक्षणले औपचारिकता पायो । तर, त्यो संरक्षण अभियान फलदायी हुन सकेन । कारण एकोहोरो संरक्षण, संरक्षण भनियो, आर्थिक उपार्जनसँग जोडिएन । कतिपय ठाउँमा बाघ, हात्ती, गैँडाले विध्वंस मच्चाए । मान्छे र वन्य–जन्तुबीच द्वन्द्व बढ्यो । आवाज उठ्यो– ‘जन्तु कि जनता ? संरक्षणमा स्थानीयको अपनत्वबोध नहुनुको परिणाम थियो त्यो । तर, जब संरक्षणलाई आम्दानीको माध्यम बनाउन थालियो, स्थानीय नै जागरूक हुन थाले खासगरी निकुञ्ज तथा आरक्ष क्षेत्रवरपर । त्यसैबखत जन्मिएको हो, वन्यजन्तु पर्यटन ।
विसं २०२६ बाट नेपालमा वन्यजन्तु संरक्षणको प्रयास सुरू भएको हो । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन विसं २०२९ मा आयो । हाल नेपालमा ११ वटा राष्ट्रिय निकुञ्ज, २ वटा वन्यजन्तु आरक्ष, ६ वटा संरक्षण क्षेत्र र १ वटा सिकार आरक्ष छन्, जसले नेपालको कुल क्षेत्रफलको २३.३९ प्रतिशत भूभाग ओगटेका छन् । निकुञ्ज आरक्षको संरक्षण र उपयोग गर्न पाउने व्यवस्था गरी मध्यवर्ती व्यवस्थापन निमावली २०५२ आयो । अहिलेसम्म नेपालमा १३ वटा मध्यवर्ती क्षेत्र घोषणा भएका छन् ।
सन् १९७३ मा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन कार्यान्वयनमा आएसँगै औपचारिकरुपमा सुरू भएको जैविक विविधता संरक्षणको दायरा अहिले फराकिलो भएको छ र नेपालको कुल भूभागको करिब २३ प्रतिशत भूभागलाई संरक्षित क्षेत्र बनाएर जैविक विविधताको रक्षा गर्ने प्रयास गरिएको छ । तर, अझै पनि त्यो प्रयाप्त देखिएको छैन । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, वातावरण संरक्षण ऐन, जलचर संरक्षण ऐनलगायतका राष्ट्रिय कानुनको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका धेरै सन्धिहरुमा नेपालले हस्ताक्षर गरेको छ ।
मध्यवर्ती क्षेत्रको अवधारणा मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण गरी निकुञ्जको दीर्घकालीन संरक्षणका लागि संरक्षण कार्यलाई सहज र द्वन्द्वमुक्त बनाउने उद्देश्यले कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो । मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू भएसँगै विगत दुई दशकको अवधिमा मानव–वन्यजन्तुबीचको द्वन्द्व निकै घटेको छ । वन्यजन्तुले मानिस, पशुधन र बालीनालीलाई पु¥याउने क्षतिमा कमी आएको छ । वन्यजन्तु पीडितलाई राहत दिने व्यवस्था गरिएको छ । मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यक्रमअन्तर्गत ठाउँठाउँमा तारबार, पर्खाल, ट्रेन्चलाइन निर्माण तथा सोलार फेन्सिङ गरी वन्यजन्तुबाट हुने नोक्सानीलाई कम गरिएको छ ।
मध्यवर्ती क्षेत्रमा गरिएको वन व्यवस्थापनका कारण निकुञ्जभित्र हुने अनियन्त्रित चरिचरन तथा रुख कटानीमा स्वतः कमी आएको छ । मध्यवर्ती क्षेत्रको वनको हैसियतमा सुधार आएसँगै त्यस वनलाई वन्यजन्तुले विस्तारित बासस्थानका रुपमा प्रयोग गर्दै आएका छन् । मध्यवर्ती क्षेत्रको वनमा वन्यजन्तुको सङ्ख्यामा वृद्धि भएसँगै ती वनमा पर्यापर्यटनका गतिविधि सञ्चालन गरेर स्थानीय लाभान्वित हुन थालेका छन् ।
पर्यापर्यटनको विकाससँगै वन्यजन्तुलाई शत्रुवत् व्यवहार गर्ने स्थानीय वन्यजन्तु संरक्षणमा सहभागी हुन थालेका छन् र यसको सकारात्मक प्रभाव निकुञ्ज संरक्षणमा समेत परेको छ । त्यसैले, विगत केही वर्षदेखि निकुञ्जभित्र हुने चोरीसिकारका घटनामा कमी आएको छ । मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापनको विद्यमान मोडल स्थानीय निकायलाई सीमित अधिकार भएको समयमा तयार पारिएको हो, तर अहिले साविकका स्थानीय निकाय स्थानीय तहमा रुपान्तरण भएका छन् । त्यसैले, देशको बदलिँदो परिवेशसापेक्ष हुने गरी मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यक्रमलाई निरन्तरता प्रदान गर्न विभिन्न चुनौतीको सामना गर्नु परेको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ ले मध्यवर्ती सामुदायिक वनको व्यवस्थापन, मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्नेलगायत आफ्नो क्षेत्रको जैविक विविधताको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई सुम्पेको छ । त्यसकारण स्थानीय तहको गठन भइसकेपछि मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापनका लागि गठित उपभोक्ता समितिको प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन गर्न पाउने अधिकार खुम्चिएको छ । उपभोक्ता समिति र स्थानीय तहबीच मेलमिलाप र समन्वय छैन ।
एकै प्रकृतिको काम गर्ने दुई भिन्न संस्था मध्यवर्ती क्षेत्रमा अस्तित्वमा रहेकाले यी दुई प्रतिस्पर्धी संस्थाजस्ता देखिएका छन् । मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापनको मुख्य साझेदार स्थानीय तह हुन् । मुख्य साझेदारलाई सहभागी नगराई मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यक्रमको औचित्य पुष्टि गर्न सकिँदैन । उपभोक्ता समिति स्थानीय तहको विकल्प हुन सक्दैनन् । मध्यवर्ती क्षेत्रमा भू–उपयोग योजना लागू गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता महसुस गरिएको छ । त्यहाँको वातावरणीय संवेदनशीलता र पर्यापर्यटनको अपार सम्भाव्यताले गर्दा स्थानीय तहसँग मिलेर काम गर्ने संयुक्त व्यवस्थापनको मोडल खोजी गर्नुपर्ने देखिन्छ, तर हालसम्म मुख्य साझेदारसँग सहकार्य गर्ने संयन्त्रको अभाव छ ।
मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापनका लागि प्राप्त हुने बजेटको मुख्य स्रोत सम्बन्धित राष्ट्रिय निकुञ्ज वा आरक्षले आर्जन गरेको आम्दानी हो । अहिले पनि थोरै आम्दानी गर्ने राष्ट्रिय निकुञ्ज वा आरक्षको मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यक्रम त्यति सफल छैन । नयाँ संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने राजस्व तीनै तहका सरकारमा बाँडिन्छ । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन–२०७४ ले राष्ट्रिय निकुञ्ज वा आरक्षले आर्जन गरेको आम्दानी संघमा ५० प्रतिशत, प्रदेशमा २५ प्रतिशत र स्थानीय तहमा २५ प्रतिशत बाँडिने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्था लागू भएसँगै मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापनका काममा हाल उपलब्ध हुँदै आएको बजेट कटौती हुने देखिएको छ ।
मध्यवर्ती क्षेत्र (बफर जोन)ले स्थानीयलाई नियमितरुपमा वन पैदावार उपभोग गर्न पाउने सहुलियत प्रदान गर्नका लागि राष्ट्रिय निकुञ्ज वा आरक्षवरिपरिको तोकिएको क्षेत्र जनाउँछ । यस्तो क्षेत्रमा बारम्बार वन्यजन्तु ओहोरदोहोर गरिरहने हुँदा त्यहाँको भू–उपयोग वन्यजन्तुमैत्री हुनुपर्ने मान्यता छ । मध्यवर्ती क्षेत्रमा हरितपेटी (ग्रीन बेल्ट) कायम गरेमा त्यो राष्ट्रिय निकुञ्ज वा आरक्षको रक्षाकवच हुन्छ । यसै मान्यताका आधारमा मध्यवर्ती क्षेत्रमा एकीकृत संरक्षण तथा विकास कार्यक्रम (आईसीडीपी) सञ्चालन गरिएको छ । विश्वमा मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापनको सुरूवात युनेस्कोको म्यान एण्ड बायोस्फियर कार्यक्रममार्फत सन् १९७४ पछि भएको हो ।